Baroordiiq Ka Bilaabantay Itoobiya Iyo Murugada Hadhaysay Tuulada Endalgeda - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaBaroordiiq Ka Bilaabantay Itoobiya Iyo Murugada Hadhaysay Tuulada Endalgeda
Baroordiiq ayaa ka dhacday tuulo ku taal Waqooyiga Itoobiya kaddib markii bulshada halkaasi ku nool ay ogaadeen in 15 ka mid ah dhallinyaradii tuuladaas oo muhaajiriin ahaa ay geeriyoodeen.
Dhalinyaradaan ayaa le’day mar ay isku dayayeen in ay ka gudbaan badda Mediterranean-ka si ay u tagaan qaaradda Yurub.
Sida uu sheegay mas’uul deegaankaas ka soo jeeda, muhaajiriintan ayaa ahaa arday dhigata dugsiga sare oo ku noolaa tuulada Endalgeda, waxaana “been u sheegay dadka wax tahriibiya oo nolol fiican u ballan qaaday”,.
Wali ma cadda marka ardaydaasi ay ka tageen tuulada Endalgeda, oo u dhow xudduudda Eritrea, iyo goorta ay dhinteen toona.
Sida ay sheegeen masuuliyiinta dalkaasi, afar kaliya ayaa ka nool 19-kii arday ee la waayey.
Bulshada deegaankaas ee lagu magacaabo Irob ayaa Isniintii waxaa soo gaaray warka dhiillada leh ee sheegaya in sagaal gabdhood iyo lix wiil oo da’yar ahaa ay dhinteen mar ay isku dayayeen in ay ka gudbaan baddaas khatarta badan.
Qaar ka mid ah masuuliyiinta dalkaas ayaa BBC-da u sheegay in “Dhowr jeer dhalinyaradaas lagu qabtay dalka Libya ayadoo qaraabadooda si khasab ah looga qaaday lacag gaaraysa 10,000 oo dollar si loo sii daayo”.
Cashirada Tukaha laga barto ee horumarka lagu gaadho